Auto CAD နမူနာပုံလေးတွေမျှဝေပေးပါဦး။ [Archive] - မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ်
မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ် > အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ အသုံးချဆော့ဖ်ဝဲများအကြောင်း ဆွေးနွေးချက်များ > Sticky---------ဖတ်ပေးပါ.. > AutoCAD > Auto CAD နမူနာပုံလေးတွေမျှဝေပေးပါဦး။
View Full Version : Auto CAD နမူနာပုံလေးတွေမျှဝေပေးပါဦး။
ဘယ်နေရာကပဲရရပေါ့ auto cad နမူနာပုံလေးတွေမျှဝေပေးပါဦး။
ဘယ်လို file type မျိုးတင်မရတာလဲဗျာ။ ..eg... .dwg file type လား။ ??? ???
You should try to upload at other image hosting sites (i.e imageshack.us, picasa, photobucket) then copy the link and use Image insert tool from the tool bar. I think this will more useful than attaching format.
ဒီ link မှာ လေ့လာကြည့်ပါနော် ..http://www.myanmarengineer.org/forum/index.php/topic,535.0.html
အားမငယ်ပါနဲ့ ဗျာ ဘယ်သူတင်တင် မတင်တင်ပေါ့..ကိုယ်တင်ရင်ပြီးတာပဲဟာ...ကိုယ်ယုံကြည်ရာ ကိုယ်လုပ်တာပဲ...အားပေးနေပါတယ်ဗျ..
ကျွန်တော်ဆို ဘယ်သူဘာပြောပြော လုပ်ချင်ရာ (မှန်တယ်ထင်တာ) လုပ်မှာပဲ..အားပေးတဲ့ သူရှိရှိ မရှိရှိ ;D
Theroritical Drawing of Tanker Proj_15699
GA Plan of Tanker Proj_15699
Longitudinal Profile of Tanker Proj_15699
ကိုဇော်ရေ Rar ဖိုင်ဖြည်ဖို့က password တောင်းနေတယ်ဗျ password လေးလုပ်ပါဦးနော်
Hi all you can get from the following links;
these are some of grease traps standard details drawings from PUB Singapore.
ခုလို ပုံတွေ ဝေမျှတာ ကျေးဇူးပါ။
အင်္ဂလိပ်ဗားရှင်းဆိုရင် ပိုကောင်းမယ်နော် :P
အော်တိုကဒ်နဲ့ လုပ်ငန်းခွင် ၀င်မယ့်သူ အတွေ့အကြုံ မရှိသေးတဲ့ သူတွေ ဆို အင်မတန် အသုံးဝင်မယ့် ပုံတွေပါ။
အင်း... သိမ်းထား သိမ်းထား
HD ထဲမှာပဲ သိမ်းထား
စာအုပ်တောင်းထားတာ ခုထိမပေးသေးဘူး &gt;:(
( ရန်မဖြစ်ရတာ ကြာလို့ ရန်စတာ ) :P
Auto Card format ဆိုတော့လည်း
Auto Card format ပဲပေ့ါ :( :( :( :(
ကျွန်တော်လည်း Autocad ပုံ အထူးသဖြင့် Mechanical Drawing နဲ့ပက်သက်တဲ့ပုံတွေခင်ဗျ..အင်ဂျင်နီယာကျောင်းတွေမှာ Hand Drawing ဆွဲတဲ့အခါ
လေ့ကျင့်ဖို့ Dimension လေးတွေနဲ့ပုံတွေရှိပါတယ်..အဲ့လိုမျိုး ပုံလေးတွေလိုချင်လို့ပါ..ကူညီပါဦး
ဒီလိုပုံမျိုးတွေဆိုရင်တော့ ဆရာဦးရောဘတ်ရဲ့ apply auto cad (3d) စာအုပ်ရဲ့ နောက်ဆုံးပိုင်းမှာပါပါတယ်ခင်ဗျာ...
3D ပုံတွေ ဆွဲချင်တယ်ဆိုလို့ Dimension ပါ အပြည့်အစုံပါတဲ့ 3D block လေးတွေ တင်ပေးလိုက်တယ်။ နောက်မှ ခက်တယ်ဆိုပြီး :e :e လာမေးရဘူးနော်။ :4: :4: :4: :4:
ဒါက ifile http://ifile.it/sbca9zw
ဒါက megaupload http://www.megaupload.com/?d=QH104W6L
Admin ကိုမောင်ဆန်း တင်ပေးထားတဲ့Theroritical Drawing of Tanker Proj_15699 ကို ကြည့်ပြီး မေးစရာရှိလို့ ပါ။
အဲဒီလို Drawing တွေကို ဆွဲမယ့် Draftsman တစ်ယောက်ဟာ ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာတစ်ယောက်မှ ဖြစ်မှာလား။
ဒါမှမဟုတ် ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာတစ်ယောက်မဟုတ်ရင်ကော ဆွဲလို့ ရပါသလား။
ပုံတွေတင်ပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ..ဒေါင်းသွားပြိး ဆွဲကြည့်နေတာတော်တော်ကြာသွားပါပြိ..တစ်ချို့ပုံတွေက တကယ်ခက်တယ် လာမမေးနဲ့ဆိုတော့လည်းအခက်သားနော်.......ဂီယာပုံလေးမှာတင်တစ်နေတာ ဘယ်လိုမှမဆွဲတတ်တော့လို့......
Construction လုပ်ငန်းထဲမှာ AutoCAD နဲ့အသက်မွေးမယ်လို့ဆိုင်းပြင်ထားကြတဲ့ ( အထူးသဖြင့် စလုံးမှာပေါ့ဗျာ ) ဗဟုသုတရှာဖွေနေဆဲ လေ့လာသင်ယူနေဆဲ မြန်မာပြည်က ညီ ညီမ တွေအတွက် ဖြတ်ညှပ်ကပ်လို့ ရအောင်ရယ်..
စလုံးမှာရှိနေတဲ့ Detail Dwg တွေရဲ့Standard တွေကို နားလည်အောင်ရယ် နမူနာဖိုင်လေး ( Soft Copy ) လေး တစ်ခု တင်ပေးလိုက်ပါတယ်..
အဲဒါလေးကတော့ Condo တိုက်ခန်းတစ်ခုရဲ့finishing Layout Detail Plan လေးပါ... တစ်နည်းအားဖြင့် As Built Dwg လေးတစ်ခုပါ.. အဲဒီအထဲမှာ M&amp;E work , Aluminium Work , Interi Archi Design work နဲ့Metal work ( steel , glass ) စသည်တို့ ရဲ့Detail လေးတွေကို လေ့လာနိုင်ပါတယ်... layars ခွဲပုံ Dimension ကို Scale ခွဲပြီး ဘယ်လိုဆွဲထားတယ်.. layout ကို ဘယ်လို ယူထားတယ်.. Legend လုပ်ထားတာတွေရယ်ကို လေ့လာပြီး line အထူအပါး ( ပုံတစ်ပုံကို Print လုပ်လိုက်ရင် line အထူအပါးရွေးချယ်တတ်မှု နဲ့ပညာသားပါမှုအပေါ်မူတည်ပြီး result လည်း ကွာသွားပါတယ် ) စသည်ဖြင့် လေ့လာကြည့်ပါလို့ပြောလိုပါတယ်... ( ဒီ Condo က စင်ကာပူမှာ ဈေးအကြီးဆုံး Condo တိုက်ခန်းလို့ပြောရမလိုပါပဲ.. သူ့ ကိုဝယ်မယ့် ဈေးနှုန်းနဲ့ အခြားနေရာတစ်ခုမှာ လုံးချင်းတစ်ခုစာ ၀ယ်လို့ ရနိုင်တဲ့ ပမာဏ သိပ်မကွာဘူးဖြစ်နေတယ် .. တစ်ခုရှိတာကသူ့ က စင်ကာပူရဲ့Famous ဖြစ်တဲ့ ဈေးကြီးတဲ့ Orchard Centre နေရာမှာ ရှိနေတာပါ..)
( အခွင့်အခါသင့်တိုင်း တင်ပေးပါ့မယ်လို့ ပြောပြီး လုံးဝပျက်ကွက်နေတဲ့အတွက် ပြန်ဖာထေးခြင်းပါ.. ကိုချစ်သီး နဲ့ကိုပါကြီး တို့ ရေ.. အခု ကျနော် နမူနာ auto cad file လေးတစ်ခု တင်ပြီနော် )
ဘယ်မှာတောင်းရမလဲ တော့မသိဘူး ။ အဆောက်အဦး တစ်ခုခု ရဲ့ Working Drawing အပြည့်အစုံ တစ်စုံလုံး ရှိရင် လိုချင်ပါတယ်။
တစ်ယောက်ယောက်မှာများရှိမလားမသိဘူး နော်။ တကယ် အလုပ်ထဲက/ အလုပ်လုပ် လို့ ရတဲ့ Drawing မျိုးကို ဆိုလိုတာပါ။
အကိုရေ အဲလိုပုံမျိုးက ကပေးရတာ ခက်ခဲပါလိမ့်မယ်။
ဘာလို့လဲဆိုတော့ client security(အထူးသဖြင့် Plan ပုံတွေပါ) ,နောက် တခြားကြောင်းအရတွေလဲ အများကြီးရှိပါသေးတယ် ပြေပြရရင်တော့ ကုန်မှာမဟုတ်ပါဘူး။
အကိုအတွက်က ဘယ်ဟာအရေးအကြီးဆုံးဖြစ်မလဲ မသိဘူး? တကယ်လို့ အားမနာတမ်းတင်ပေးလို့ရမယ့်ပုံ ကျနော့်မှလဲ ရှိမယ်ဆိုရင် တင်ပေးပါမယ်။
ကိုလိပ်ကြီးရေ .. အရေးကြီးတာကတော့ ပုံတစ်စုံလုံးဘဲဗျ :e ကျွန်တော် QS အဖြစ် အလုပ်ဝင်ရ မှာမလို့ပါ။ လေ့လာ ချင်တဲ့သဘောပါ။
ပြီးတော့ တကယ့် International Standard နဲ့ ဆွဲထားတဲ့ ပုံစံမျိုးကို မတွက်ဖူးသေးလို့ပါ။ အလုပ်ဝင်တဲ့ အခါ ကိုယ့်ဘက်က အားလုံးအဆင်သင့် ဖြစ်နေချင်တာပါ။
တစ်အားကြီးတော့ အရေးမကြီးပါဘူး။ ခုလိုပြောပေးဖ်ါရတာဘဲ ကျေးဇူးအများကြီး တင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
Below link is to download many auto cad drawings. You also need to sign up this website to download. If you have any links , please share for us. Thank you so much.
ကျွန်တော်လက်ရှိ AutoCAD 2011 သုံးနေပါတယ်။ အရင် 2010 မှာရောအခုရော ကျွန်တော် Render လုပ်ရင် အခန်းအလင်းရောင်အတွက်ပြသနာနည်းနည်းကြုံနေပါသည် ။ နေ့ဘယ် sky background and illumination လုပ်ထားပြီး Render လုပ်ရင် အခန်းထဲက point lights တွေကမလင်းပဲ အခန်းပြတင်းပေါက်ကကြည့်ရင်အခန်းကမှောင်နေပါတယ် .............ပြီးတော့ 3dsmax v8 ထဲ AutoCAD dwg file import လုပ်မရဘူးဖြစ်နေတယ် ..........သိရင်ရှင်းပြကြပါဦး ။
အကိုရေ အဲလို အခက်အခဲတွေ အတွက် ဒီအောက် &quot;အခက်အခဲတွေ ရှိ၇င် ဒီကိုလာပါ&quot; (http://www.myanmarengineer.org/forum/index.php/topic,546.0.html) မှာ သွားရေးပေးပါနော်
ဒီအောက် (http://www.myanmarengineer.org/forum/index.php/topic,546.msg54206.html#msg54206)မှာ ပြန်စာရေးရန် လုပ်ပြီး ၀င်ရေးလိုက်ပါ အကို။
သိတဲ့ အကိုတွေ အကို့ ပိုစ့် ကို စာပြန်ပေးပါလိမ့်မယ်။
ကိုချောလွင် ဆိုက်ကပုံလေးတစ်ပုံကိုဘဲနမူနာတင်ပေးလိုက်ပါတယ် ။ လောလောဆယ်တော့ သူများပုံကူးချတင်ရလို့ခွင့်လွှတ်ပေးပါလို့။ :4:
ကျွန်တော် အခု တင်ထားပေးတာက Zaw Ti Ka development project က Gas pipe line တွေပါ။ အဟဲ
အထင်တော့ မကြီးနဲ့ ကျွန်တော်ဆွဲတာဟုတ်ဘူး။ :4: :4:
အပေါ်က ပုံတင်ထားတာ အကောင်းမထင်နဲ့ အဟီး တောင်းစရာ ရှိလို့ ချုပ်လိုက်တာ :2: :2: :2: :2:
Aluminum Window တွေကို Plan တွေ Section တွေ ပယ်ပယ်နှယ်နှယ် ဖြတ်ပြီး ဆွဲထား တာရှိရင်လိုချင်ပါသည်။
ရှိရင် ပေးကြပါဦးဗျ။ :7: :7: :7:
အဲဒါဆိုရင် ကို (chan09)ချန်းချန်းရှိတယ်ဗျား...သူ့သာ အပူကပ်ပေတော့ ;D
ကိုချမ်းချမ်း အပျောက်ရိုက်နေတယ်ဗျ။ လုပ်ကြဦး :&#039;( :&#039;( :&#039;( :&#039;(
တခြားဘီသူမှ မရှိကြဘူးလားဗျ။ လုပ်ကြပါဥိးနော်
How to attach the file to show somebody?
မှာ ဘယ်လို လုပ်လဲ ပြထားပါတယ်.. အကို သွားဖတ်ကြည့်လိုက်ပါဦးနော်..
ဖိုင်လား .. အကူအညီ ထဲ မှာ ဘယ်လို လုပ်လဲ ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ..
ကို ngamaung လိုချင်သလို ပယ်ပယ်နှယ်နှယ်ဆွဲထားတာတော့ မဟုတ်ဘူး.. သုံးလို့ ရမယ်ထင်လို့ ရှိတာလေး ဒီမှာ (http://www.mediafire.com/?vhkg0gk23ig) တင်ပေးလိုက်တယ်.. ဥာဏ်ရှိသလိုသာ ကျူပ်ကျက်လြည့် ပေတော့ဗျာ.. :4:
Aluminum Window တွေကို Plan တွေ Section တွေ ပယ်ပယ်နှယ်နှယ် ဖြတ်ပြီး ဆွဲထား တာရှိရင်လိုချင်ပါသည် ။
AUTO CAD 2011 software လိုင်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျာကူညီကြပါအုံး
အကိုကအပြင်မှာသုံးနေတာလဲ မြန်မာပြည်က သုံးနေတာလားမသိဘူး
အပြင်ကနေဆို Autodesk (http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/u/gsearch/results?siteID=123112&catID=123155&id=2088334&qt=autocad+2011+trial) ကနေ Trial Version ဒေါင်းလိုက်ပီး ပြန် Crack လုပ်လိုက်ပါ အဲဒါက စိတ်အချရဆုံး ပါဘဲ။ ဘယ်နေရာ မှာ crack တင်ထားလဲဆိုတော့ ဒီနေရာလေး (http://www.myanmarengineer.org/forums/showthread.php?113-AutoCAD-software-%E1%82%8F%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B9%E1%82%95-%E1%80%9E%E1%80%B0%E1%81%8F%E1%80%86%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%85%E1%80%95%E1%80%B9-application-%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8/page7&highlight=autocad+2011)ကပိုစ်#70မှာ သွားကြည့်ပါ။
စကား မစပ်ဒီနေရာလေးက ပုံတွေ သီးသန့် တောင်းဖို့ နေရာလေးမို့ နောက် ပိုင်း Autocad Application နဲ့ ပတ်သက်တာလေးတွေကို ဒီအောက် (http://www.myanmarengineer.org/forums/showthread.php?113-AutoCAD-software-%E1%82%8F%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B9%E1%82%95-%E1%80%9E%E1%80%B0%E1%81%8F%E1%80%86%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%85%E1%80%95%E1%80%B9-application-%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8)မှာ သွားကြည့်ပီး လိုချင်တာ မရှိပါကသက်ဆိုင်ရာ ပိုစ့် တခုခု အောက်မှာ ကူညီရေးပေးပါ့လားနော့်။
ဒီရက်ပိုင်း autocad ပြန်လေ့လာဖြစ်နေလို့3D စတင်ဆွဲမဲ့ သူတွေအတွက် အခြေခံပုံလေးတွေတင်ပေးပါမယ်။
ဒါကေတော့ အခြေခံ 3D ပုံလေးပါ ။
dimensions တွေ ထည့်ထားပေးပါတယ်။
ဒါကတော့ 3D ဆွဲထားပြီး autocad ပုံကို screen shoot ထားတဲ့ ပုံပါ
ဒါကတော့ 3D autocad dwg ဖိုင်လေးပါ။
ဆွဲနည်းအဆင့်အင့်ကို တော့ ဒီvideo မှာကြည့်ပါ။
ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာကျောင်းသားများအတွက် ရည်ရွယ်ပြီး ME မှာ ဆွဲခဲ့ဖူးတဲ့ ပုံလေးတွေမျှဝေပါ၇စေ။ ;)
မ၇ှင်းတာ မျိူးရှိခဲ့၇င်လဲပြောပါ။ သိခဲ့ရင် ပြန်ဖြေပါ့မယ်။ ;)
ဒါကတော့ Front view and side view of GA plan ပါ။
ဒါကတော့ ကုန်ပတ်(deck)တစ်ခုချင်းစီအလိုက် Top views Of GA plan ပါ
ဒါကတော့ Midshipsection construction drawing ပါ။
ဒါကတော့ 2D Theoretical line drwaing့ ပါ
ဒါကတော့ 3D Theoretical line drwaing့ ပါ